Akụkọ - Otu esi agbanye eriri ụgbọ elu na usoro ọrụ?
Olee otú mbịne ụgbọelu eri na machining usoro?
A na-akpọ eriri eri ụgbọ elu eri ahụ, eriri ezé ya na eri akụkụ anọ, mana eriri dị larịị na-abụkarị eri a na-arụ na ihu ihu nke cylinder ma ọ bụ diski ahụ. Jectzọ ntụgharị nke ngwa ọrụ ntụgharị maka ihe eji arụ ọrụ mgbe ị na-arụ ọrụ eriri ụgbọelu bụ Archimedes gburugburu, nke dị iche na eri na-arụkarị ọrụ. Nke a chọrọ otu mgbanwe nke ihe eji arụ ọrụ, na ụgbọ elu nke etiti na-eme ka ọkpụkpụ ahụ dị na mpempe akwụkwọ na mpụta. N'okpuru anyị ga-akọwapụta otu esi agbanye eriri ụgbọelu igwe usoro.
1. Njirimara Basic nke eri
A na-ejikarị eriri eriri eme ihe n'oge ị na-arụ ọrụ, yana nke mpụga na nke dị n'ime. E nwere isi ihe anọ dị ka ọdịdị nke profaịlụ eri: triangular thread, trapezoidal thread, serrated thread and rectangular thread. Dị ka ọnụ ọgụgụ nke eri nke eri: otu eri na multi-eri eri. N'ime igwe dị iche iche, ọrụ nke akụkụ ndị nwere eri gụnyere tumadi ihe ndị a: otu bụ maka ịkwado na ijikọ; nke ọzọ bụ maka izipu ike ma gbanwee ụdị ngagharị. A na-ejikarị eri atọ eme ihe maka njikọta na ike; trapezoidal na akụkụ anọ eri na-ejikarị na-ebunye ike ma gbanwee ụdị mmegharị. Ihe oru ha choro na usoro nhazi ha nwere uzo di iche ruru ha.
2. Usoro nhazi usoro eri
Na mgbakwunye na iji ngwaọrụ igwe nkịtị, iji belata oke nhazi nke ịkpụzi eriri, meziwanye arụmọrụ ọrụ, ma hụ na nhazi nhazi, a na-ejikarị CNC machining arụ ọrụ.
A na-ejikarị iwu atọ nke G32, G92 na G76 maka ngwaọrụ igwe CNC.
Iwu G32: Ọ nwere ike ịhazi otu eriri strok, otu mmemme mmemme dị arọ, mmemme ahụ dịkwa mgbagwoju anya;
Iwu G92: A ga - enwe ike ịghọta okirikiri nchacha usoro, nke na - enye aka maka ịmezigharị mmemme ahụ, mana ọ ga - achọ ka oghere ọrụ ahụ mebie tupu oge eruo.
Iwu G76: Imeri adịghị ike nke Iwu G92, a ga-arụ ọrụ ahụ site na oghere iji mechie eri n'otu oge. Vingchekwa oge mmemme bụ ezigbo enyemaka maka ime ka mmemme dị mfe.
G32 na G92 bụ usoro ịkpụcha akwara, akụkụ abụọ mbepụ ahụ dị mfe iyi. Nke a bụ tumadi n'ihi ọrụ nke otu akụkụ nke agụba ahụ n'otu oge, nnukwu ikike mkpụmkpụ na ihe isi ike ịcha. Mgbe eri nwere nnukwu pasta na-egbutu, ọnụ mbepụ na-ebu ngwa ngwa n'ihi nnukwu ịkpụ omimi, nke na-akpata njehie na dayameta nke eri ahụ; n’agbanyeghi, nkenke nhazi ụdị eze ahụ dị elu, ya mere a na-ejikarị ya eme ihe maka ịmịcha obere eriri. Ebe ọ bụ na a na-emecha ihe eji agagharị ngwá ọrụ site na mmemme, usoro mmemme ahụ dị ogologo, mana ọ na-agbanwe agbanwe.
G76 bụ nke usoro mgbagha. N'ihi na ọ bụ usoro akụkụ otu akụkụ, ikike mbelata nke ziri ezi dị mfe iji mebie ma eyi, nke mere na eriri eri nke igwe ahụ anaghị adịzi. Na mgbakwunye, ozugbo akụkụ mbepụ gbanwere, izi ezi nke ọdịdị eze adịghị mma. Otú ọ dị, uru nke usoro ígwè ọrụ a bụ na omimi mbelata na-ebelata, ibu ngwá ọrụ dị obere, na mwepụ mgbawa dị mfe. Ya mere, usoro nhazi ahụ kwesịrị ekwesị maka nhazi nke nnukwu eriri eri.